Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Takefusa Kubo Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ “Messi ndị Japan”Anyị Takefusa Kubo Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Takefusa Kobo Childhood Akụkọ- Nyocha rue ụbọchị. Ebe E Si Nweta Real Madrid Fans.
Ee, onye ọ bụla maara na ejiri ụkwụ aka ekpe ya mara mma, nnukwu njikwa nso na anya maka ihe mgbaru ọsọ, gọziri agọzi na a gọziri ya aha 'onye Japan onye Messi'. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Takefusa Kubo nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Takefusa Kubo mụrụ na ụbọchị 4 nke June, 4 June 2001 ndị mụrụ ya; nna ya Takefumi Kubo na nne ya n'obodo Kawasaki, Japan.
Takefusa Kubo ya na Nna ya. Ebe E Si Nweta WorldSportsHolic.
Takefusa Kobo toro site na nzụlite nke ụlọ ntorobịa nke etiti. Ezinaụlọ ya sitere na Kawasaki, obodo a ma ama na Japan maka baseball, egwuregwu egwuregwu, bọl, ụlọ Indoor, ịgba ígwè na ịgba ịnyịnya.
Ezigbo ezinụlọ Takefusa Kobo.
Ozi sitere na ọha na eze na-egosi na Takefusa toro dị ka nwa nke nne na nna ya, na-enweghị nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị.
Itolite na nna nwere-egwu egwuregwu na ibi n’obodo na-agba bọọlụ mepụtara okike ebumpụta ụwa maka ya ịbanye n’egwuregwu ahụ mara mma. Na mbido, ọ hụrụ onwere na o nwere ikike ebumpụta ụwa na ikike njikwa nke ụgbọ mmiri ahụ na bọọlụ.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'agbanyeghị na ọtụtụ ezinụlọ na-azụ ụmụ ha n'echiche nke inwe agụmakwụkwọ na ịchọta ọrụ na-abụghị egwuregwu na Japan, ndị nne na nna Takefusa Kobo siri ọnwụ na nwa ha agaghị emebi agụmakwụkwọ bọọlụ ya maka ihe ọ bụla.
Mgbe ọ dị afọ asaa, Takefusa Kubo malitere ịgba bọl maka FC Persimmon, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị na mpaghara ya n'obodo Kawasaki.
Ihe omume ya hụrụ ya na nnukwu agụmakwụkwọ ndị ọzọ nọ na mpaghara ya chọrọ, na-akpali ịkwaga Tokyo Verdi na 2008 na Kawasaki Frontale na 2010. N'oge a, ọ malitere ịrọ nrọ football football European.
N'oge ahụ, ndị nkuzi ya na agụmakwụkwọ ya maara Takefusa Kobo ka aghọrọ nnukwu ihe ka ha na-ele ya na-etinye ụzụ ya n'adịghị ka ndị egwuregwu ụmụaka ọzọ. Ya mere, mgbe ọ mere ọkpụkpọ oku ka o soro ụlọ klọb Japan kacha elu jikọọ ya na FC Barcelona, ​​mpako ha amaghị oke.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Ndụ Ọrụ Nlekọta mbụ na Europe
Ọchịchọ Takefusa maka egwuregwu ahụ hụrụ ya ka ọ na-agafe ule agụmakwụkwọ ma sonye na otu ndị otu egwuregwu bọọlụ Japanese FC Barcelona na Japan. Ọ nọgidere na-egwu egwuregwu ya dị ka onye ọkpụkpọ ahụ nke nwere ike ịmegharị ndị mmegide gara aga dịka ha adịghị adị.
Na August 2009, a nyere Takefusa Kobo onyinye MVP maka asọmpi nke ọ sonyere na afọ asatọ.
Takefusa Kubo- Afọ Nke Oge Mbido na FC Barcelona Franchise Academy.
Ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ka otu afọ gachara, n'April 2010, a họpụtakwara ya dị ka onye otu FC FC School School ka o sonye na Sodexo European Rusas Cup nke emere na Belgium.
Ị maara? Enwetara Takefusa Kobo ihe MVP ọzọ na asọmpị a n'agbanyeghị na ndị otu ya gụchara nke atọ. Ọtụtụ hụrụ nke a dịka akara nke na-egosi na ọ ga-aga nke ukwuu.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Akpanwu akwukwo akuko
Barcelonalọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ama ama ama ama ama ama ama ama na FC Barcelona, ​​La Masia rụpụtara ọrụ ya na Japan. N'August 2011, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kpọrọ ya ka ọ bịa Europe maka nnwale nke o mere ule na agba. Na nnabata, ha nyere ya ohere ịmalite Barca Alevin C (U11).
Ị maara?… N'ime oge izizi ya zuru ezu (2012 – 13), Takefusa bụ onye na-enwe ọkaibe n'egwuregwu bọọlụ na-etolite etinyere mgbaru ọsọ 74 n'ime naanị egwuregwu 30 (ee, ị nwetara ikike ahụ!). Chọta n'okpuru otu ihe ngosi vidiyo nke arụmọrụ ya ebe ọ nọ nimlow site otutu ndi mmegide. Ebe e si nweta AirFutbol.
Mgbe anyị lechara vidiyo ahụ, anyị kwenyesiri ike na ị kwenyere na ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara aha aha Takefusa Kobo 'onye Japan onye Messi'. Debe nkọwa mgbe ị gụchara edemede a ka ị gwa anyị echiche gị.
N'ime oge 2014 – 15, a na-akwalite Takefusa Kobo na Barca Infantil A (U14). N'oge a, nke ya ịchụpụ na mkpebi siri ike ghọrọ akụ ya kacha baa uru. Egwuregwu Takefusa dị ka ịdị mma nke Rolls Royce nke agwakọtara na injin nke Mustang. Onye ọ bụla hụrụ ya ka o nwere nke ahụ Lionel Messi njirimara na-eme bọl jidesiri ya ike ma ọ bụ glued na ụkwụ ya. Otu ihe Takefusa Kobo hụrụ n'anya bụ ịnara ndị na-eme egwuregwu okenye na ya karịrị ya.
Takefusa Kubo- Roadzọ a ma ama Akụkọ. Ebe E Si Nweta AquaVista.
Mgbe afọ nke 2015, Barcelona bịara n'okpuru microscope nke FIFA ha mebie iwu mgbe ha na-ebinye ndị otu bọọlụ.
Maka Takefusa, okporo ụzọ nke otu nke mbụ mere ihe gbagwojuru anya na-egbu mgbu mgbe enyere aka ulo akwukwo FC Barcelona nyefee mmachi site na FIFA maka ihe akpọrọ na mbufe adịghị. A machibidoro klọb ahụ ịbanye na Takafusa Kobo n'ihi nke a na-enye iwu enyere Barca aka ka ọ chụpụ ya na klọb ahụ.
Na mbido, Kubo nọrọ ọnwa ole na ole nke oge ya na Spen n'egwuregwu bọọlụ nke mere ka ọ daa mbà n'obi. N’inwezu nke a, o kpebiri ịhapụ klọb ahụ laghachi na obodo ya nke Japan. Mgbe ọ nọ na Japan, Kobo nwere ndị ntorobịa mmalite nke Tok Tokyo.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Na-ewu ewu Akụkọ
Takefusa Kobo ọbụlagodi na Japan ka siri kpebisie ike ịlaghachite profaịlụ dị elu na Europe, n'oge a. DỊGHỊ ya na FC Barcelona onye mechuru ya ihu. Mgbe FC Toyko dị, a na-ebuli ọmarịcha talent na klọb klọb, oge mpako maka nne na nna ya.
Takefusa Kobo Bilie na-ewu ewu Akụkọ na FC Tokyo.
Mgbe ya na ọgbakọ ndị otu Japanese na-agba bọl okenye, Takefusa malitere imebi ihe ndekọ. Ị maara?… Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ nke ọdụdụ & nke ọdụdụ nwa na J-League History. Ihe ngosi a kara akara mbata ya na ọkwa ịgba bọọlụ.
Njem Ikpeazụ ahụ na Europe:
Mmezu nke Takefusa Kobo hụrụ ya ka ọ na-abịa na radar nke Manchester City, Bayern Munich na Paris Saint-Germain bụ ndị chọrọ ya ekele maka ụkwụ aka ekpe ya, nnukwu njikwa na anya maka ihe mgbaru ọsọ. Na mbu, ekwuputara nkwekọrịta maka ya ka ọ laghachite na FC Barçelona bụ onye n'oge ahụ malitere ịrịọ ikpere na ikpere ya maka mbinye aka ya.
Ị maara?… Takefusa jụrụ nloghachi ịlaghachi na FC Barcelona iji kwaga onye na-asọ mpi ya, Real Madrid. Iji kpoo nnu n'ime ọnya ahụ, Takafusa Kobo furu Real Madrid naanị £ 1.78m iji banye ya na FC Tokyo.
Takefusa sonyere Real Madrid.
Takefusa Kobo dị ka n’oge edere ede gosi ụwa na ọ bụ nkwa ọma mara mma nke ọgbọ egwuregwu bọọlụ Japanese ya mgbe akụkọ mba ahụ bụ Hidetoshi Nakata. Ugbu a nke fọdụrụ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na ịbanye na Real Madrid, ọtụtụ ndị egwuregwu ajụọla ajụjụ a; Onye bụ Nwanyị Takefusa Kobo ma ọ bụ WAG?.
Onye bụ Nwanyị Takefusa Kobo? - Ebe E Si Nweta Nyefee.
Dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ, a pụrụ iji ịhụnanya zoro ezo nke Takefusa zoro ezo bụ nke na-agbanahụ nyocha nke ọha na eze naanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya bụ nke nzuzo yana ikekwe ihe nkiri. Ọ dị ka Takefusa ahọrọla ilekwasị anya n'ọrụ ya ma chọọ izere ọhụụ na ndụ nzuzo ya. Eziokwu a na-eme ka o siere ndị na-ede blọgụ ike ịmara Takefusa Kobo ịhụnanya ndụ na akụkọ ntolite.
Agbanyeghị, n'ihi ntorobịa ya na nnabata nke nnukwu klọb n'ụwa a na-agbagharaghị ndị na-eto eto na-enweghị ike ịmasị ya, ọ ga-ekwe omume na Takefusa nwere ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye wee ghara ịbụ enyi. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ndị na-eto eto ọgbọ ya na-akpa, yabụ, anyị nwere ike ịkọ nkọ na ọ nwere enyi nwanyị mana ọ masịrị ịghara ime ka ọhaneze mara.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Ndụ nke Onye
Tomata ndụ onwe onye nke Takefusa ga - enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ụdị onye ọ bụ na egwu egwuregwu.
Apụghị na ọnọdụ egwuregwu bọọlụ, Takefusa bụ mgbakọ na mwepụ, nke dị nro, nke nwere mmetụta, na-akpali akpali, ọ naghị agwụ ike ma nwee ikike imeghari ma mụta ngwa ngwa maka mgbanwe na gburugburu ebe obibi na ọdịbendị.
Eziokwu nke Ndụ nke Takefusa Kubo. Ebe E Si Nweta BeSoccer.
Takefusa Kobo na-atọ ụwa ụtọ mgbe niile. Ọ na-achọkarị ịmata ihe, na-enwekwa mmụọ mgbe niile na ọ nweghị oge zuru ezu ọ chọrọ iji mee ka ndị fans Madrid gosipụta na ọ dị mma.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Ndụ Ezinụlọ
Takefusa bụ onye na-elekọta mmadụ ma nwee mmasị ịnọnyere ndị enyi na ezinụlọ, karịchaa ndị otu na-eto eto. Ezinaụlọ dị ya ezigbo mkpa ma iwepụta oge na-eme ka ya na ha nwee mmekọrịta miri emi.
Ndụ ezinụlọ Takefusa Kubo.
Mgbe mgbasa ozi na-ejide nkọwa nke nna ya, obere ihe ọmụma dị banyere nne ya. Echere na nne mama Takefusa Kubo nwere họọrọ ime nke ọma ịghara ịchọ ọhaneze.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - LifeStyle
Ikpebi n'etiti ịdị mma na ihe ụtọ abụghị ugbu a nhọrọ siri ike maka Takefusa.
N'agbanyeghi na o kwenyere na inweta ego na football bu ihe di nkpa. Takefusa nwere nkwenye siri ike banyere otu esi edebe ego ya na nhazi ya. Dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ, ọ naghị ebi ndụ ọmarịcha ndụ nke ọtụtụ ụgbọala dị oke ọnụ dị ka a hụrụ.
Takefusa Kobo Eziokwu Ndụ. Ebe E Si Nweta Nye Ihe Mgbaru Ọsọ.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Eziokwu efu
Afọ TakeFusa mụrụ: Ihe omume na-esote mere;
N'afọ ahụ, n'ụzọ ziri ezi na September 11, 2001, ihe a maara dị ka mwakpo 9 / 11 mere. Itoolu ndi igbo N'otu oge ahụ weghaara ụgbọ elu ụgbọelu US nke ụlọ US ụlọ abụọ na-akụda abụọ n'ime ụgbọ elu ahụ na World Trade Center na Manhattan, New York City.
A maara afọ 2001 dị ka “Oge anwụ nke Afọ Shark“. Ọ bụ afọ nke edepụtara ọnụọgụ kachasị nke mwakpo shark.
N'afọ ahụ 2001, Companieslọ ọrụ ọgwụ n'ụwa niile kwenyere ire ọgwụ ọgwụ Aids na ọnụahịa dị ọnụ ala na Africa, mbelata ruru 90% iji nyere aka luso ọgụ megide ọrịa na-akpata ọnwụ.
Na 26 nke Jenụwarị na afọ ahụ, ala ọma jijiji na-atụ 7.9 n'ihe ọ̀tụ̀tụ̀ Richer jigotara Gujarat nke India, na-egbu ihe dị ka ndị mmadụ 20,000 ma merụọ ihe ruru 167,000 ndị ọzọ.
Takefusa Kubo Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu - Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Takefusa Kobo gbakwunyere Ihe ndị gbasara Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Andrew Robertson Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Ifiedbọchị agbanwee: November 25, 2020